မျိုးဆက်သစ်မှတ်တိုင်: October 2011
မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်တို့၏ အားထားရာ မဟာချူလာတက္ကသိုလ်(ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဘန်ကောက်)
တက္ကသိုလ်အ၀င်ဝ ဆိုင်းဘုတ်မှတ်တိုင်နှင့် စာကြည့်တိုက် ပိဋကတ်တိုက် အဆောက်ဦးများအားတွေ့ရစဉ်
ဤမဟာချုလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်ကြီးသည်ကား ထိုင်းနိုင်ငံရှိ တက္ကသိုလ်များစွာအနက်
အထင်ရှားဆုံး အကျော်ကြားဆုံး တက္ကသိုလ်ကြီးဟု အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံသားတိုင်း သိရှိကြလိမ့်မည်ထင်ပါသည်။
တနည်းပြောရသော် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာတော်သင် ရဟန်းတော်များအများစု တက်ရောက်နေသည့်တက္ကသိုလ်ကြီးဟု ဆိုလျှင်လည်း မှားလိမ့်မည်မထင်ပါ။ခန့်မှန်းခြေအရ ပြောရသော် ဤတက္ကသိုလ်ကြီးတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေကြသည့် မြန်မာပြည်ဖွား ရဟန်းတော်အရေအတွက်မှာအပါး(၆၀)ကျော်ခန့်ရှိပါ၏၊
ရုံးခန်း၊ကွန်ပျူတာခန်း၊ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမအစုံလင်ပါရှိသည့် ဘောလုံးကွင်းသဏ္ဍာန်ကျောင်းသားစာသင်ဆောင်ကြီးအား တွေ့ရစဉ်
အမေရိကန်၊ထိုင်ဝမ်၊တရုတ်၊ဂျပန်အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စသော နိုင်ငံများမှ ရဟန်းရှင်လူများ တက်ရောက်နေကြသလို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသည့်အင်ဒို၊ဗီယက်နမ်၊မလေးရှား၊လာအို၊ကမ္ဗောဒီးယားမှ ရဟန်းရှင်လူများစွာလည်း တက်ရောက်နေသည့် တက္ကသိုလ်ကြီးပေတည်း။
တက္ကသိုလ် အဆောက်ဦးများအား ကားလမ်းမပေါ်မှ မြင်တွေ့ရစဉ်
ဤတက္ကသိုလ်ကြီးတွင် တက်ရောက်နေသည့် နိုင်ငံများစွာအနက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာသင်တက်ရောက်သည့် ရဟန်းတော်အရေတွက်မှာ အများဆုံးဖြစ်သည်ဟုသိရပါသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် ဤတက္ကသိုလ်ကြီးသည် သီရိလင်္ကာ၊အိန္ဒိယနိုင်ငံများမှ တက္ကသိုလ်များကဲ့သို့ ကျောင်းကြေးသွင်းရသည့် ငွေကြေးပမာဏမှာ အမတန်သက်သာသလို ကျောင်းစရိတ်ကို တစ်နှစ်တည်းဖြင့် အပြီးပေးသွင်းစရာမလိုတဲ့အတွက် ငွေကြေးအားနဲကြသည့် မြန်မာပြည်မှ ပညာသင်ရဟန်းတော်များမှာ အလွန်ပင် အဆင်ပြေသည်ကတကြောင်း၊ ဤထိုင်းနိုင်ငံတွင် လာရောက်လုပ်ကိုင် စားသောက်နေကြသည့် မြန်မာလူမျိုးအရေအတွက်မှာလည်း နှစ်သန်းကျော်ရှိကြသည့်အတွက် ပစ္စည်းလေးပါးထောက်ပံ့မှုပိုင်းတွင်လည်း မြန်မာရဟန်းတော်တို့အတွက် အားကိုးစရာ ရပ်တည်စရာ ဒကာ၊မများစွာရှိကြသည်ကတကြောင်းမို့ ဤမျှလောက်ထိ များပြားနေသည်မှာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပါပေ။
တက္ကသိုလ်စာသင်ကျောင်းဆောင်ကြီးအား အလည်ဗဟိုတည့်တည့်မှ မြင်တွေ့ရစဉ်
ပွင့်လင်းစွာရေးသားရသော် မြန်မာပြည်မှ ရဟန်းတစ်ပါးအနေဖြင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှနာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ကေလာနိယတက္ကသိုလ်မှာ အမ်အေတန်းတက်ရောက်မည်ဆိုပါက အနဲဆုံး မြန်မာကျပ်ငွေ(၂၅)သိန့်း(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀)ခန့်လောက်ပါမှအဆင်ပြေပါသည်၊ဤမျှလောက် များပြားလှသော ငွေကြေးပမာဏအတွက် မြန်မာရဟန်းတော်အများစုအနေဖြင့် အဘယ်သို့လျှင် တတ်နိုင်ပါမည်နည်း။
ရဟန်းဒကာ၊မ တောင့်တင်းကြသည့် ရဟန်းတော်အချို့အတွက်သာ (၂၅)သိန်းဆိုသောကျောင်းစရိတ် ပမာဏကို တတ်နိုင်ကြသည်မို့ သာမန်ရဟန်းတော်တို့အတွက် သီ၇ိလင်္ကာနိုင်ငံသို့သွားရောက်ပညာတော်သင်ကြားဘို့ ဆိုသည်ကို စိတ်တောင်မကူးဝံ့ကြပါ။
တက္ကသိုလ်ဝန်းအတွင်းရှိ ပတ်လမ်းမကြီးအား မြင်တွေ့ရစဉ်
ဒီလိုဆိုလျှင် ရန်ကုန်မြို့ မရမ်းကုန်မြို့နယ် ဓမ္မပါလကုန်းမြေ စွယ်တော်ဘုရားအနီးတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီးမှာ တက်ရောက်ပေါ့လို့ပြောလာမည်ဆိုပါက အပြောလွယ်သလောက် အဆန်းခက်သည်ဟုဆိုရပေမည်၊ အဘယ့်ကြောင့်ဟူမူ ၄င်းထေရ၀ါဒတက္ကသိုလ်ကြီးတွင် ဘီအေတန်းတက်ရောက်ခဲ့ဖူးသည့် ရဟန်းတော်တစ်ပါး၏ပြောပြချက်အရ "ဦးဇင်းရေ တက္ကသိုလ်က ကျောင်းစရိတ်မပေးရတာတော့ မှန်တယ်ဘုရား...ဒါပေမယ့် နေစရာအတွက် အဆောင်လည်းမပေးတော့ တစ်နေ့နေ့ ဘတ်စ်ကားတိုးစီးပီး ကျောင်းတက်ရတာလည်း မလွယ်လှပါဘူး..ပိုဆိုးတာက တက္ကသိုလ်က ကြွေးတဲ့ ဆွမ်းဟင်းကလည်း ဘာအရသာမှမရှိတော့ စားတာစားလိုက်ရတယ် အာဟာရမဖြစ်တာတော့ အမှန်ပဲဘုရား..ဒီတော့ တက္ကသိုလ်အနီးမှာရှိတဲ့ ထမင်းဆိုင် စားသောက်ဆိုင်မှာဘုန်းပေးနေရတာများတော့ ငွေကတော့အရမ်းကုန်တယ်လေ.
အားရစရာဆိုလို့ အတန်းနည်းပြဆရာတွေဘဲရှိတာ..သင်ကြားရေးဆရာအများစုကတော့ သင်ကြားမှုပိုင်းမှာ တော်တော် တော်ကြပါတယ်..ဦးဇင်းလည်း လ်ိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်နဲ့ပဲ အဲဒီကနေ ဘီအေဘွဲ့ရပီးဒီရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းအကူညီနဲ့ အခု ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကို ရောက်လာခဲ့တာပါလို့"သူဖြတ်သန်းလာခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတာကို စာဖတ်သူများ သိစေရန် ဖော်ပြပေးလိုက်ရခြင်းပါ။
ဘောလုံးကွင်းသဏ္ဍာန် တက္ကသိုလ်စာသင်ကျောင်းဆောင်ကြီးအား အဝေးမှ မြင်တွေ့ရစဉ်
အထက်ပါ ပြောကြားချက်တွေကို ကြည့်ပီး စာဖတ်သူအနေဖြင့် ဒီဘုန်းကြီးကတော့ သူဘီအေဘွဲ့ရလာခဲ့တဲ့ အမိမြန်မာပြည်က ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ်ကြီးကို ကျေးဇူးကန်းသည်ဟု မထင်စေလိုပါ၊သူ့အနေဖြင့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုရဲ့ မတူညီတဲ့ အချက်တွေကိုထောက်ပြသောအားဖြင့် ပြောကြားသွာတာပဲဟု ယူဆစေချင်ပါသည်။
တက္ကသိုလ်ဝန်းအတွင်းရှိရေကန်အလယ်မှာ တည်ဆောက်ထားသည့် ဥဒကုက္ခေပသိမ်တော်ကြီး(ရေလယ်သိမ်တော်ကြီး)
ယခု မဟာချူလာလောင်ကွန် တက္ကသိုလ်ကြီးကတော့ တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အင်္ဂါရပ်တွေနဲ့ ညီညွတ်နေသည်မှာ ပြေးကြည့်စရာပင်မလို တွေးကြည့်တာနဲ့ပင် သိကြမည်ထင်ပါသည်၊နေထိုင်စရာ အဆောင်ပေးသလို အစားအသောက်အတွက်လည်း ဘာမှမပူပင်ရ၊အာဟာရပြည့်ဝသည့် ဆွမ်းဟင်းလျှာတွေကို တစ်နေ့တမျိုး မရိုးရအောင်ဆိုသလို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပြီး သင်ကြားရေးပိုင်းမှာလည်း အရည်ချင်းပြည့်ဝသော နည်းပြဆရာ ဆရာမများကို ခန့်အပ်ထားတဲ့အတွက် ပညာသင် ရဟန်းရှင်လူများအတွက် အစစအရာရာ အဆင်ပြေသည်မို့ ပေးသွင်းထားရသည့် ကျောင်းဖီးကြေး(ကျောင်းစရိတ်)နဲ့တန်သည်ဟု ပြောရပေမည်တည်း။
အခုအချိန်မှာတော့ တက္ကသိုလ်ဝန်းကြီး တစ်ခုလုံး ရေများဖြင့် ပိတ်ဖုံးနေချေပြီတကား၊
သို့အတွက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတိုင်းလိုလို စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပီး အဆောင်အသီးသီးမှာကျန်ရှိခဲ့သည့် မိမိတို့၏ ပစ္စည်းပစ္စယများကို လှေများဖြင့်သွားရောက်ယူငင်နေကြသည့် မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပီး "အဖြစ်ကတော့ မနှစ်ကနဲ့ မတူဆိုသလို " ယခင်က ကားဖြင့် (သို့မဟုတ်)ခြေလျှင်ခရီးသွားခဲ့ရသည့် တက္ကသိုလ်ဝန်းကြီးကား အခုတော့ ရေပေါ်မှာ လှေလှော်ပြီး သွားလာနေကြရပါတကားဟု ပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားများကို ယုံကြည်လေးနက်စွာ လက်ခံလာမိသလို ကျေးဇူးရှင်အမိတက္ကသိုလ်ကြီး သဘာဝ ရေဘေးအန္တရာယ်ကနေ မြန်မြန်ရုန်းထွက် လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေမိပါတော့သည်။
တက္ကသိုလ်ကြီး သဘာဝ ရေဘေးဒဏ်သင့် မှု ၀မ်းနဲခြင်းအထိမ်းမှတ်အဖြစ် ရည်ညွှန်းလျှက်
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 10/28/20110ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အထင်ရှားဆုံး အကျော်ကြားဆုံးစာရင်းထဲမှာ တစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သည့် မဟာချူလာလောင်ကွန်တက္ကသိုလ်ကြီးရေဘေးသင့်ခံရမှု ပုံရိပ်မှတ်တမ်း
ယခင်က မြေလမ်းခရီး..... အခုတော့ လှေလမ်းခရီး...
ရေလည်မှာ ရောက်နေတဲ့ ကျောင်းသားဆောင်တွေ...
ပစ္စည်းများအား ရေလွတ်ရာကို ရွှေ့ပြောင်းနေကြစဉ်
ရေလည်ခေါင်မှာ ရောက်နေတဲ့ တက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဘင်အဆောင်
ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေ လိုက်ဝေပေးနေတဲ့ ကားပေါ့..
ပညာသင် မဟာယာနကျောင်းသားရဟန်းတော်များ ပျော်ပျော်ပါးပါး လှေလှော်သွားနေသည့်မြင်ကွင်း
နေစရာဘုံပျောက်နေကြသည့် ခွေးတွေအတွက်လည်း သနားစရာ...
ယခင်က ဖိနပ်စီးခဲ့ရသည့် မြေလမ်းခရီးဟာ အခုတော့ ဖိနပ်စီးစရာမလိုတော့တဲ့ ပလပ်စတစ်လှေလမ်းခရီးပေါ့..
လတ်တလောအချိန်မှာတော့ ပလပ်စတစ်လှေလေးတွေဟာ ကားတစ်စီးထက်တောင် အားထားစရာပေါ့
အဆောင်မှာ ကျန်ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကို လှေများဖြင့် သယ်ဆောင်နေကြစဉ်
"လှေဆင်း မြင်းအတက်ဆိုသလို" လှေပေါ်ကဆင်းရမှာလည်း အခုလို သတိထားရပေါ့
တက္ကသိုလ်ကထိကဆရာတော်များကို စက်တပ်လှေဖြင့် ပို့ပေးနေစဉ်
လှေမလှော်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက် လှေကယ်ရီသမားတွေက ဤသို့ကူညီပေးကြပေါ့
"အဖော်မမှီး တစ်ပါးတည်း" လှော်ခပ်ပြီး သွားနေတဲ့ မြင်ကွင်းပေါ့
ထောက်ပံ့ရေး ပစ္စည်းများကို လိုက်လံ ပို့ဆောင်နေကြစဉ်
ရေကြောက်တဲ့ သူတွေအတွက် သက်ကယ်အိပ်တွေ
အောက်ထပ်တွေမှာ နေလို့မရတော့တဲ့အတွက် ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ အပေါ်ထပ်
ကားကြီးများဖြင့် ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေ လိုက်လံပို့ဆောင်ပေးနေကြစဉ်
လေမလှော်တတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုစက်တပ်လှေဖြင့် ပို့ပေးနေစဉ်
အထင်ရှားဆုံး အကျော်ကြားဆုံး တက္ကသိုလ်ကြီးဟု အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံသားတိုင်း သိရှိကြ
တနည်းပြောရသော် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာတော်သင် ရဟန်းတော်များအများစု တက်ရောက်နေ
သည့်တက္ကသိုလ်ကြီးဟု ဆိုလျှင်လည်း မှားလိမ့်မည်မထင်ပါ။ခန့်မှန်းခြေအရ ပြောရသော် ဤတက္ကသိုလ်
ကြီးတွင် တက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေကြသည့် မြန်မာပြည်ဖွား ရဟန်းတော်အရေအတွက်မှာ အပါး
အမေရိကန်၊ထိုင်ဝမ်၊တရုတ်၊ဂျပန်အိန္ဒိယ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် စသော နိုင်ငံများမှ ရဟန်းရှင်လူများ တက်ရောက်နေကြသလို အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများ ဖြစ်ကြသည့် အင်ဒို၊ဗီယက်နမ်၊မလေးရှား၊လာအို၊
ကမ္ဗောဒီးယားမှ ရဟန်းရှင်လူများစွာလည်း တက်ရောက်နေသည့် တက္ကသိုလ်ကြီးပေတည်း။
ဤတက္ကသိုလ်ကြီးတွင် တက်ရောက်နေသည့် နိုင်ငံများစွာအနက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာသင်
တက်ရောက်သည့် ရဟန်းတော်အရေတွက်မှာ အများဆုံးဖြစ်သည်ဟုသိရပါသည်၊ အဘယ့်ကြောင့်
ဆိုသော် ဤတက္ကသိုလ်ကြီးသည် သီရိလင်္ကာ၊အိန္ဒိယနိုင်ငံများမှ တက္ကသိုလ်များကဲ့သို့ ကျောင်းကြေး
သွင်းရသည့် ငွေကြေးပမာဏမှာ အမတန်သက်သာသလို ကျောင်းစရိတ်ကို တစ်နှစ်တည်းဖြင့် အပြီးပေးသွင်းစရာမလိုတဲ့အတွက် ငွေကြေးအားနဲကြသည့် မြန်မာပြည်မှ ပညာသင်ရဟန်းတော်များ
မှာ အလွန်ပင် အဆင်ပြေသည်ကတကြောင်း၊ ဤထိုင်းနိုင်ငံတွင် လာရောက်လုပ်ကိုင် စားသောက်
နေကြသည့် မြန်မာလူမျိုးအရေအတွက်မှာလည်း နှစ်သန်းကျော်ရှိကြသည့်အတွက် ပစ္စည်းလေးပါး
ထောက်ပံ့မှုပိုင်းတွင်လည်း မြန်မာရဟန်းတော်တို့အတွက် အားကိုးစရာ ရပ်တည်စရာ ဒကာ၊မများစွာ
ရှိကြသည်ကတကြောင်းမို့ ဤမျှလောက်ထိ များပြားနေသည်မှာ အဆန်းတော့မဟုတ်ပါပေ။
ပွင့်လင်းစွာရေးသားရသော် မြန်မာပြည်မှ ရဟန်းတစ်ပါးအနေဖြင့် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှ
နာမည်ကြီး တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် ကေလာနိယတက္ကသိုလ်မှာ အမ်အေတန်းတက်ရောက်
မည်ဆိုပါက အနဲဆုံး မြန်မာကျပ်ငွေ(၂၅)သိန့်း(အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၅၀၀)ခန့်လောက်ပါမှ
အဆင်ပြေပါသည်၊ဤမျှလောက် များပြားလှသော ငွေကြေးပမာဏအတွက် မြန်မာရဟန်းတော်
အများစုအနေဖြင့် အဘယ်သို့လျှင် တတ်နိုင်ပါမည်နည်း။
ရဟန်းဒကာ၊မ တောင့်တင်းကြသည့် ရဟန်းတော်အချို့အတွက်သာ (၂၅)သိန်းဆိုသော
ကျောင်းစရိတ် ပမာဏကို တတ်နိုင်ကြသည်မို့ သာမန်ရဟန်းတော်တို့အတွက် သီ၇ိလင်္ကာနိုင်ငံသို့
သွားရောက်ပညာတော်သင်ကြားဘို့ ဆိုသည်ကို စိတ်တောင်မကူးဝံ့ကြပါ။
ဒီလိုဆိုလျှင် ရန်ကုန်မြို့ မရမ်းကုန်မြို့နယ် ဓမ္မပါလကုန်းမြေ စွယ်တော်ဘုရားအနီးတွင်
ဖွင့်လှစ်ထားသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကြီးမှာ တက်ရောက်ပေါ့လို့
ပြောလာမည်ဆိုပါက အပြောလွယ်သလောက် အဆန်းခက်သည်ဟုဆိုရပေမည်၊ အဘယ့်ကြောင့်
ဟူမူ ၄င်းထေရ၀ါဒတက္ကသိုလ်ကြီးတွင် ဘီအေတန်းတက်ရောက်ခဲ့ဖူးသည့် ရဟန်းတော်တစ်ပါး၏
ပြောပြချက်အရ "ဦးဇင်းရေ တက္ကသိုလ်က ကျောင်းစရိတ်မပေးရတာတော့ မှန်တယ်ဘုရား...ဒါပေ
မယ့် နေစရာအတွက် အဆောင်လည်းမပေးတော့ တစ်နေ့နေ့ ဘတ်စ်ကားတိုးစီးပီး ကျောင်းတက်
ရတာလည်း မလွယ်လှပါဘူး..ပိုဆိုးတာက တက္ကသိုလ်က ကြွေးတဲ့ ဆွမ်းဟင်းကလည်း ဘာအရသာမှ
မရှိတော့ စားတာစားလိုက်၇တယ် အာဟာရမဖြစ်တာတော့ အမှန်ပဲဘုရား..ဒီတော့ တက္ကသိုလ်အနီး
မှာရှိတဲ့ ထမင်းဆိုင် စားသောက်ဆိုင်မှာဘုန်းပေးနေရတာများတော့ ငွေကတော့အရမ်းကုန်တယ်လေ.
အားရစရာဆိုလို့ အတန်းနည်းပြဆရာတွေဘဲရှိတာ..သင်ကြားရေးဆရာအများစုကတော့ သင်ကြားမှု
ပိုင်းမှာ တော်တော် တော်ကြပါတယ်..ဦးဇင်းလည်း လ်ိမ်ဖယ်လိမ်ဖယ်နဲ့ပဲ အဲဒီကနေ ဘီအေဘွဲ့ရပီး
ဒီရောက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းအကူညီနဲ့ အခု ဒီတက္ကသိုလ်ကြီးကို ရောက်လာခဲ့တာပါလို့"သူဖြတ်သန်း
လာခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတာကို စာဖတ်သူများ သိစေရန် ဖော်ပြပေးလိုက်
အထက်ပါ ပြောကြားချက်တွေကို ကြည့်ပီး စာဖတ်သူအနေဖြင့် ဒီဘုန်းကြီးကတော့ သူ
ဘီအေဘွဲ့ရလာခဲ့တဲ့ အမိမြန်မာပြည်က ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာပြု တက္ကသိုလ်ကြီးကို ကျေးဇူးကန်း
သည်ဟု မထင်စေလိုပါ၊သူ့အနေဖြင့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုရဲ့ မတူညီတဲ့ အချက်တွေကို
ထောက်ပြသောအားဖြင့် ပြောကြားသွာတာပဲဟု ယူဆစေချင်ပါသည်။
ယခု မဟာချူလာလောင်ကွန် တက္ကသိုလ်ကြီးကတော့ တက္ကသိုလ်ကြီးတစ်ခုရဲ့အင်္ဂါရပ်
တွေနဲ့ ညီညွတ်နေသည်မှာ ပြေးကြည့်စရာပင်မလို တွေးကြည့်တာနဲ့ပင် သိကြမည်ထင်ပါသည်၊
နေထိုင်စရာ အဆောင်ပေးသလို အစားအသောက်အတွက်လည်း ဘာမှမပူပင်ရ၊အာဟာရပြည့်ဝ
သည့် ဆွမ်းဟင်းလျှာတွေကို တစ်နေ့တမျိုး မရိုးရအောင်ဆိုသလို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ချက်ပြုတ်ကျွေး
မွေးပြီး သင်ကြားရေးပိုင်းမှာလည်း အရည်ချင်းပြည့်ဝသော နည်းပြဆရာ ဆရာမများကို ခန့်အပ်ထား
တဲ့အတွက် ပညာသင် ရဟန်းရှင်လူများအတွက် အစစအရာရာ အဆင်ပြေသည်မို့ ပေးသွင်းထားရ
သည့် ကျောင်းဖီးကြေး(ကျောင်းစရိတ်)နဲ့တန်သည်ဟု ပြောရပေမည်တည်း။
သို့အတွက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတိုင်းလိုလို စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြပီး အဆောင်အသီးသီးမှာ
ကျန်ရှိခဲ့သည့် မိမိတို့၏ ပစ္စည်းပစ္စယများကို လှေများဖြင့်သွားရောက်ယူငင်နေကြသည့် မြင်ကွင်းကို
့်ကြည့်ပီး "အဖြစ်ကတော့ မနှစ်ကနဲ့ မတူဆိုသလို " ယခင်က ကားဖြင့် (သို့မဟုတ်)ခြေလျှင်ခရီး
သွားခဲ့ရသည့် တက္ကသိုလ်ဝန်းကြီးကား အခုတော့ ရေပေါ်မှာ လှေလှော်ပြီး သွားလာနေကြရပါတကား
ဟု ပြောင်းလဲခြင်းသဘောတရားများကို ယုံကြည်လေးနက်စွာ လက်ခံလာမိသလို ကျေးဇူးရှင်
အမိတက္ကသိုလ်ကြီး သဘာဝ ရေဘေးအန္တရာယ်ကနေ မြန်မြန်ရုန်းထွက် လွတ်မြောက်နိုင်ပါစေလို့
22-10-2011(Saturday) 4;57 AM
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 10/22/2011 1 ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီမြို့နေ ဦးကြည်လင်း+ဒေါ်မေသိန်းမိသားစုတို့၏ မဟာဘုံကထိန်သက်န်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲ
ပို့စ်တင်သူ- ဆန်းသစ်အောင် ===အချိန် 10/19/20110ဦးက ဒီလိုမြင်တယ်
ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဘန်ကောက်မြို့၊အနုဆာဝရီချိုင်နေ မအမ်းနှင့်သူငယ်ချင်းများ၏ သဒ္ဓါဆွမ်းကျွေးအလှူပွဲ
ထိုင်းနိုင်ငံ၊လရောင်မြို့နေ ကိုဇော်ဦး+မမီးမီး မိသားစုတို့၏ အိမ်သစ်တက်မင်္ဂလာပွဲ
မြန်မာကျောင်းသားရဟန်းတော်တို့၏ အားထားရာ မဟာချူလာတက...
ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အထင်ရှားဆုံး အကျော်ကြားဆုံးစာရင်းထ...
ထိုင်းနိုင်ငံ ချွန်ဘူရီမြို့နေ ဦးကြည်လင်း+ဒေါ်မေသိ...
ထိုင်းနိုင်ငံ၊လရောင်မြို့နေ ကိုဇော်ဦး+မမီးမီး မိသ...